I-PenguinsTok Apk Download For Android [TikTok Alternative] - Luso Gamer
Yize abasebenzisi be-Android bejwayelene nalezi zinkundla ezidumile eziku-inthanethi njenge-TikTok njll. Nokho, izinkundla eziku-inthanethi ezinjalo zivinjelwe kwamanye amazwe. Ngokugxila ekunseleleni okusha namathuba, lapha silethe i-PenguinsTok Apk.
Ngenkathi sihlola uhlelo lokusebenza ngokujulile, sithole izici eziningi ezahlukene ezifana nezinye izinkundla. Lokhu akusho ukuthi bakopishe wonke umklamo. Kukhona izinketho ezahlukene eziyingqayizivele nazo zengezwe ngaphakathi.
Lokho kufaka phakathi Ilabhulali eyingqayizivele, Izindikimba Zangokwezifiso Eziningi, Ideshibhodi Yokusetha enemininingwane futhi ayikho enye inketho yokuhola. Yebo, manje amalungu abhalisiwe angathola imali enhle ngokwabelana ngamavidiyo anekhono. Ngakho-ke unentshisekelo kufayela lohlelo lokusebenza bese ufaka i-PenguinStok App.
Iyini i-PenguinStok Apk
I-PenguinStok Apk iyinkundla yokuzijabulisa eku-inthanethi eyakhiwe amaphengwini. Inhloso yokuhlela inkundla bekuwukuhlinzeka ngenye indlela evikelekile. Lapho amalungu abhalisiwe engajabulela ukwabelana nokuqukethwe kwevidiyo okuyingqayizivele nababukeli.
Ngeke kube okungalungile uma sibize le nkundla ngokuthi enye indlela engcono kakhulu ye-TikTok. Yize singalokothi siphikisane nabasebenzisi ukugwema ukufaka iTikTok. Noma kunjalo, abasebenzisi abanamakhono abakaze banikeze leli thuba lokuzuza imali enhle ngeplatifomu.
Yebo, abasebenzisi be-Android abakwazi ukuthola imali eqondile ku-TikTok. Kepha uma kukhulunywa ngePenguinStok abasebenzisi be-android bangathola kalula inzuzo enhle kusuka Ukuthola App. Abadinga ukukwenza nje ukufaka inguqulo yakamuva yohlelo lokusebenza ngaphakathi kwe-smartphone ye-Android.
Bese uzibhalisa nenkundla ehlinzeka ngemininingwane efanele. Ngemva kokuqeda ukubhalisa, manje finyelela ideshibhodi eyinhloko bese uqala ukulayisha okuqukethwe. Uma usukulungele ukuthola inzuzo enhle endaweni yesikhulumi bese ufaka i-PenguinStok Download.
Usayizi 94 MB
Igama lephakheji com.pv.pvtrades
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule le nkundla entsha eyakhiwe yethulwa onjiniyela. Abasebenzisi bakholelwa ukuthi, ochwepheshe banikeze inguqulo ye-beta ukuze bahlole ulwazi lomsebenzisi. Noma kunjalo, asinaso isiqiniseko ngenguqulo ye-beta noma inguqulo yesilingo yohlelo lokusebenza.
Uma bethule inguqulo ye-beta, lapho-ke abalokothi banikeze le nketho eqondile yokuthola imali. Ngakho-ke sihlaziya isimo, sithole singokokuqala futhi sisemthethweni. Khumbula ukuthi le nguqulo isetshenziswa kuphela eBrazil naseThailand.
Uma kuziwa ekubhaliseni ukuqondisa ngokwethu nomsamo. Bese kungase kudinge inombolo yeselula yezwe. Ngaphandle kokubamba inombolo yeselula, akunakwenzeka ukubhalisa ngokwethu endaweni yesikhulumi. Khumbula ukufakazela ubuqiniso ikhodi yokuqinisekisa izothunyelwa ngenombolo yeselula.
Ngemva kokufaka ikhodi yokuqinisekisa, manje abasebenzisi bavunyelwe ukufinyelela ideshibhodi eyinhloko. Labo abahlala ngaphandle kwezwe bangase bangakwazi ukubhalisa. Kodwa abasebenzisi bangaphandle bangajabulela okuqukethwe mahhala ngaphandle kokuvinjelwa.
Ngakho-ke amakhono akho okulingisa nokuhlela asobala. Bese kufanele uzame le nkundla entsha emangalisayo. Imiklomelo etholiwe ingahwetshwa ngaphakathi kwehholo lokuhweba futhi ihwebe ngekheshi langempela. Ngakho-ke unethalente noma ngabe liyadlala noma liyadweba, kufanele ulande iPenguinStok Android.
Ukufaka uhlelo lokusebenza kunikeza kokubili.
Ukuzijabulisa nethuba lokuzuza.
Amavidiyo ashicilelwe afinyeleleka ngokuqondile ukuze abukwe.
Kusho ukuthi akukho ukubhaliswa okungase kudinge ukubuka okuqukethwe.
Nokho, ukuze uthole ukubhaliswa imali kuyadingeka.
Ukubhaliswa kwenombolo yeselula kuyadingeka.
I-Advanced AI isetshenziselwa ukuqapha nokuhlinzeka ngokuqukethwe okuhlobene nokusesha.
Isixhumi esibonakalayo sohlelo lokusebenza silula futhi siyasebenziseka kuselula.
Ungayilanda kanjani i-PenguinStok Apk
Okwamanje uhlelo lokusebenza luyafinyeleleka ukuze lulande ku-Google Play Isitolo. Kodwa yahlukaniswa ngesigaba se-premium futhi idinga ikheli le-IP lezwe ukuze ufinyelele isicelo. Okusho ukuthi amadivayisi afanelekile wezwe kuphela avunyelwe ukulanda ifayela lohlelo lokusebenza.
Labo abafuna inkundla eyiqiniso yokulanda ifayela le-Apk ngokuqondile. Bese sincoma ukuthi labo basebenzisi bavakashele iwebhusayithi yethu futhi balande ifayela lohlelo lokusebenza ngaphandle kwemvume. Vele uthephe inkinobho yesixhumanisi sokulanda enikeziwe bese ulanda ifayela le-Apk kalula.
Ifayela lohlelo lokusebenza esilisekelayo lapha ngelangempela futhi alidingi ukubhaliswa. Ngaphambi kokunikeza uhlelo lokusebenza ngaphakathi kwesigaba sokulanda, siyalufaka kuma-smartphones ahlukene. Ngemva kokufaka uhlelo lokusebenza asikwazi ukubona inkinga ngaphakathi.
Kuze kube manje izinhlelo zokusebenza ezahlukene zokuzijabulisa nezokuthola imali zishicilelwe lapha kuwebhusayithi yethu. Ukuze uhlole lawo mathuba angcono kakhulu sicela ulandele izinhlelo zokusebenza. Labo banjalo I-TikTok 18 Plus Apk futhi I-YouTube Shorts Apk.
Uma indawo yakho yamanje kuseBrazil noma Thailand futhi ufuna ithuba le-inthanethi. Ukwabelana ngokuqukethwe kwethalente lakho nezibukeli kungazuza imali enhle njengembuyiselo. Bese sincoma labo bantu abanamakhono ukuthi bafake i-Penguinstok Apk.
Izigaba Ezokuzijabulisa, Apps Amathegi Ukuthola App, I-PenguinStok ye-Android, I-PenguinStok Apk, I-PenguinStok App, I-PenguinStok Download Imeyili kwemikhumbi